Gallery: Editor's Picks
Aqalka sare oo isku dayaya inuu soo afjaro khilaafka dalka
09.12.2018. View gallery
Faarax Cali Shire oo eedeeyay Xukuumadda Gaas
08.12.2018. View gallery
Xildhibaano Mooshin ka gudbiyay heshiiyada uu saxiixay Farmaajo
06.12.2018. View gallery
Musharixiinta Puntland oo Shir Jaraa'id ku qabtey Garowe
04.12.2018. View gallery
Muuse Biixi oo xafiiskiisa ku qaabiley wafdi Midowga Yurub ka socda
Villa Somalia oo lagu eedeeyay faragelinta doorashada KG
03.12.2018. View gallery
Musharax Deni oo dhaqanka Puntland ka dalbadey dhexdhexaadnimo
01.12.2018. View gallery
Farmaajo oo sheegay inuu xiray albaabkii deganaashe la'aanta
29.11.2018. View gallery
Aqalka Sare oo warbixin ka soo saarey Khilaafka ka jira dalka
28.11.2018. View gallery
Farmaajo oo shir uga qeybgalaya Kenya
27.11.2018. View gallery
Farmaajo oo Kenya shir kaga qeybagalaya
25.11.2018. View gallery
Muuse Biixi oo booqday Tukaraq
24.11.2018. View gallery
Hogaamiye noocee ah ay Puntland u baahan tahay?
Faysal Cali Waraabe oo kahor yimid go'aankii Muuse Biixi ee DF [DAAWO]
22.11.2018. View gallery
Muuse Biixi oo qaadacay wadahadalka DF
21.11.2018. View gallery
Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay Talyaaniga
Khayre oo ku faaney in Somalia ay dhaqaale kobac sameysay
18.11.2018. View gallery
Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay Safiirka cusub ee Mareykanka
Musharax Jabiye u jawaabey Wasiirka Kaluumeysiga Puntland.
17.11.2018. View gallery
Khayre oo gudoomiyay shir arrimo muhiim ah looga hadlay
16.11.2018. View gallery
Farmaajo oo ka hadlay Isbedelka gobolka iyo kaalinta Soomaaliya [DAAWO]
14.11.2018. View gallery
Saciid Dheere oo khudbad ka jeediyay furitaanka Ololihiisa doorashada
Somaliland oo qarka u saaran qalalaase Siyaasadeed [DAAWO]
12.11.2018. View gallery
Ku xigeenka Duqa Garoowe oo baaq u diray Shirkadaha Xawaaladaha
11.11.2018. View gallery
Fahfaahin ku saabsan Shirkii Bahar Dar
10.11.2018. View gallery
Farmaajo uu u ambabaxay dalka Itoobiya
09.11.2018. View gallery
Shariif Xasan oo fahfaahiyay is-casilaadiisa
08.11.2018. View gallery
Khayre oo ka hadlay arrimo xasaasi ah
07.11.2018. View gallery
Haween doonaya inay kamid noqdaan Baarlamaanka Puntland
06.11.2018. View gallery
Haysom oo Muuse Biixi kala hadlay colaadda Tukaraq
04.11.2018. View gallery
Mushaarixiinta KG oo shuruudo adag la hor-dhigay
03.11.2018. View gallery
IGAD iyo Aqalka Sare oo kawada hadlay xalka colaadda Tukaraq
02.11.2018. View gallery
DF oo heshiis la gashay Bangiga Adduunka
01.11.2018. View gallery
Wakiiladda QM iyo AU oo la kulmay Madaxweynaha KG
Villa Somalia oo lagu eedeeyay fargelin doorashada KG
30.10.2018. View gallery
Culimo ka hadashay khilaafka maamulada iyo dowlada Federaalka ah
29.10.2018. View gallery
Taliyaha Ciidanka Puntland oo isku soo sharaxay xilka Madaxweynaha
28.10.2018. View gallery
Farmaajo oo doonaya dib u habeyn Cadaaladda Soomaaliya
27.10.2018. View gallery
Axmed Madoobe oo ka fal-celiyay Guddiga uu magacaabay Khayre [DAAWO]
26.10.2018. View gallery
Shirkii Garowe ee maamul goboleedyada oo lasoo gaba-gabeeyay
25.10.2018. View gallery
Xildhibaano xaqiijiyay inuu jiro Mooshin lagu furayo Dastuurka Puntland
24.10.2018. View gallery
Kheyre oo amar siiyay wasiirka difaaca iyo Indha Qarshe
23.10.2018. View gallery
Shariif Xasan oo ka digay faragelinta Villa Somalia ee KG
22.10.2018. View gallery
Somaliland oo wajahaysa Khilaaf dhanka doorashada
21.10.2018. View gallery
Madaxda maamullada oo gaarey Garoowe
20.10.2018. View gallery
Farmaajo oo shir gudoomiyay Shirka Gollaha Wasiiradda
18.10.2018. View gallery
Wasiiradda Arrimaha Dibadda Eritrea iyo Ethiopia oo yimid Muqdisho
Waaxda Socdaalka oo xafiis ka furatay Puntland
16.10.2018. View gallery
DF oo qorsheynaysa inay barnaamij gaar ah u sameyso naafatadda
15.10.2018. View gallery
Baroor diiq loo sameeyay dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe
14.10.2018. View gallery
Gaas oo Garowe dib ugu laabtey
13.10.2018. View gallery
Muuse Biixi oo digniin u diray DF
12.10.2018. View gallery
Maalint dhimirka adduunka oo laga xusay Garowe
10.10.2018. View gallery
Dibadbax lagu dalbanayo Cadaalad iyo Caafimaad oo ka dhacay Gaalkacyo
09.10.2018. View gallery
Khayre oo xafiisyo dowladeed kormeer ku tagey
08.10.2018. View gallery
Musharax Faarax Cali Shire oo ajandihiisa siyaasadeed soo bandhigay
07.10.2018. View gallery
Duqa cusub ee Garowe oo waxqabadkiisa soo bandhigay
06.10.2018. View gallery
Musharax Faarax Cali Shire oo lagu soo dhaweeyay Garoowe
05.10.2018. View gallery
Muuse Biixi iyo Cirro oo kulmay markale
04.10.2018. View gallery
Dr Eenow oo si kulul u eedeeyay Gaas
03.10.2018. View gallery
Farole oo gudoomiye looga dhigay Gudiga xalinta Khilaafka DF iyo Maamullada
02.10.2018. View gallery
Gollaha Degaanka Dangorayo oo waxqabadkiisa soo bandhigay
01.10.2018. View gallery
Is-rasaaseyn khasaaro sababtay oo ka dhacay Garoowe
29.09.2018. View gallery
Taliye ka hadlay amniga gobolka Nugaal
27.09.2018. View gallery
Maxkamadda Ciidamada Puntland oo dil ku xukuntay xubno Daacish iyo Al Shabaab ah
Kalluumeysata Boosaaso oo tababar la siiyay
26.09.2018. View gallery
Qalbi Dhagax oo lagu soo dhaweeyay Caasimadda Somaliland
25.09.2018. View gallery
Shacabka Muqdisho oo u midoobey aaska nin nolosha lagu gubay
24.09.2018. View gallery
Gaas oo shaaciyay Ujeedka safarkiisa Boosaaso
23.09.2018. View gallery
Safarka Gaas ee Sanaag oo laga warbixiyay
22.09.2018. View gallery
Gaas oo Baran booqday xilli waqtiga ka dhamaanayo
20.09.2018. View gallery
Senator Farole oo iftiimiyay khilaafka siyaasadeed ee dalka
19.09.2018. View gallery
Gaas oo Qardho booqasho ku tagey xilli waqtiga ka dhamaanayo
18.09.2018. View gallery
Aqalka Sare oo isna ka dooday amniga Muqdisho
Khayre oo u jawaabey madaxda maamulada Soomaaliya
Wafdi ka socda Aqalka Sare oo gaarey Garoowe
16.09.2018. View gallery
Kulan looga hadlay Dastuurka oo lagu qabtey Garowe
Duqa cusub ee Garowe oo balan-qaad dhul bixin sameeyay
13.09.2018. View gallery
Odayaal ku baaqay in la joojiyo dagaalka koonfurta Sool
11.09.2018. View gallery
Nuxurka Khudbada Farmaajo ee furitaanka kalfadhiga 4aad
10.09.2018. View gallery
Dhismaha wadada Garowe iyo Galkacyo oo joogsatay , Hadaba maxaa sababay?
08.09.2018. View gallery
Muxuu Farmaajo kusoo arkay xarunta degmada Howlwadaag?
Puntland: Xildhibaano ku baaqay in la joojiyo dagaalka Sool
06.09.2018. View gallery
Saldhiga Garowe oo ay weerar ku qaadeen ciidan gadoodsan
05.09.2018. View gallery
Cirro oo eedeymo culus u jeediyay Muuse Biixi
04.09.2018. View gallery
Shirkii Kismaayo oo hal sabab dib loogu dhigay
03.09.2018. View gallery
Farmaajo oo Madax kala duwan kula kulmay China
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Degaanka oo ka hadley Musuqmaasuqa
01.09.2018. View gallery
Muqdisho oo lagu soo dhaweeyay Xasan Sheekh
30.08.2018. View gallery
Garoowe oo yeelatay duq cusub
Puntland: Mooshin ka dhan ah DP World oo buray [DAAWO]
27.08.2018. View gallery
Kadib Daawasho, fadlan rukumo bogga Youtube-ka Garowe Online
Madaxweyne Mustafa oo isbedel balan-qaadey
25.08.2018. View gallery
Ganacsade dukaan ku leh magaalada Garowe oo fariin u direy dhalinyarada Soomaaliyeed
23.08.2018. View gallery
Farmaajo oo farta ku fiiqay cida hortaagan dowladiisa
Diyaar-garowga Munaasabada Ciida ee Magaalo madaxda Puntland ee Garowe
20.08.2018. View gallery
La Taliye hore oo ka hadlay doorashooyinka Puntland
19.08.2018. View gallery
Ciidamada Puntland oo dib ula wareegay Af-Urur
18.08.2018. View gallery
Nin dhalinyaro ah oo tix gabay ah u tireyey musharax uu taageersan yahay
17.08.2018. View gallery
Farmaajo oo wadahadal la yeeshay Ismaaciil Cumar Geelle
Jabhad laga aas-aasay degaanada Somaliland iyo maamulka oo ka hadlay
16.08.2018. View gallery
Sidee u dhacday isku shaandheynta Taliye-yaasha Ciidamada?
Farmaajo oo kulan la yeeshay Gollaha Dhaqaalaha Qaranka
15.08.2018. View gallery
RW ku xigeenka DF oo Hees macaan ku luuqeeyay
Duqa Muqdisho oo shacabka baaq u diray
Axmed Madoobe oo afka furtay, eedeyna u jeediyay dowladda
Shacabka Garoowe oo aragti ka dhiibtay go'aanka Doorashada 2019
Baarlamaanka Puntland oo go'aan ka gaarey doorashada 2019
Taliska Booliska Muqdisho oo amaro soo saarey
14.08.2018. View gallery
Yariisow oo la siiyay amar muhiim u ah Dhalinyaradda
Muuse Biixi oo balanqaad cajiib ah sameeyay
13.08.2018. View gallery
Juxa oo ku dhawaaqey Musharnimada xilka Madaxweynaha Puntland
10.08.2018. View gallery
Muuse Biixi oo booqday gobollada
07.08.2018. View gallery
Muuse Biixi oo ka hadlay xaaladda DDSI, baaqna diray
Khayre oo Khudbad ka jeediyay saxiixa Heshiiskii Nabada South Sudan
Sidee Khayre loogu soo dhaweeyay Khartoum, Sudan?
06.08.2018. View gallery
Kulan Casho Sharaf ah oo Gaas u sameeyay Khayre
04.08.2018. View gallery
Khayre oo shaah la cabey dhalinyarada Garoowe
WARARKA TELEFISHINKA BBC SOMALI 02.08.2018
03.08.2018. View gallery
Xubno katirsan Daacish oo lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah
02.08.2018. View gallery
Sidee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya loogu soo dhaweeyay Qardho?
31.07.2018. View gallery
Khayre oo dhalinyaro kula hadlay Garoowe
Khayre oo booqashadiisii ugu horeysay ku tagey Puntland
29.07.2018. View gallery
Farmaajo oo booqasho uga bilaabtay Asmara
28.07.2018. View gallery
Faysal Cali Waraabe oo weerar afka ah ku qaadey Biixi
27.07.2018. View gallery
Muuse Biixi oo fariin dalab ah u diray Beesha Caalamka
26.07.2018. View gallery
Gaas iyo Keating oo warsaxafadeed kuwada qabtey Garowe 25/07/2018
25.07.2018. View gallery
Somaliland oo Xafiis cusub ka furatay Imaaraadka
Gaas oo ku laabtay Garoowe xili uu wajahayo loolan siyaasadeed
23.07.2018. View gallery
Axmed Madoobe oo jeediyay khudbad kaloo xasaasi ah
Muuse Biixi oo ka hadlay kulankii Farmaajo iyo Faysal Cali Waraabe
21.07.2018. View gallery
Musharax Siciid Dani oo ka hadlay doorashada Puntland iyo arrimo kale
Khayre oo wafdi ka socday India ku qaabilay Xafiiskiisa
18.07.2018. View gallery
Farmaajo oo weerar afka ku qaaday Siyaasiyiin
Khayre oo culumo kula kulmay Muqdisho
17.07.2018. View gallery
Khudbadii Axmed Madoobe ee shirka Brussels
Wasiirka amniga oo ka hadlay weerarada Al-Shabaab ee Muqdisho
16.07.2018. View gallery
Faysal Cali Waraabe oo ka qeybgalaya Shirka Brussels
Qaraxyo iyo weerar toos ah oo ka dhacay Muqdisho
14.07.2018. View gallery
Go'aanno kasoo baxay Shirka Gollaha Wasiiradda
12.07.2018. View gallery
Wasiirka Maaliyadda oo ka warbixiyay waxqabadkiisa
11.07.2018. View gallery
Farmaajo oo Muqdisho dib ugu soo laabtay
Taliya Booliska oo la kulmay saraakiil dhalinyarada
10.07.2018. View gallery
Khayre oo booqday xarunta Wasaaradda qorsheynta
Weerarkii Otto Otto oo khilaaf ka dhex abuuray DFS [DAAWO]
09.07.2018. View gallery
Dowlada Soomaaliya oo faah-faahisay Qarax ka dhacay Muqdisho
08.07.2018. View gallery
Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday Jabuuti
06.07.2018. View gallery
Machadka Isgaarsiinta Qaran oo dib loo furay
Farmaajo oo dalacsiiyay Saraakiil
04.07.2018. View gallery
Khayre oo ka hadlay doorashada 2020
Wafdi ka socda Qadar oo kula kulmay Khayre iyo Wasiir
03.07.2018. View gallery
Madaafiic ku dhacday nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha Muqdisho
01.07.2018. View gallery
Daawo: Dabaaldegii Xuska 1 Luulyo Iyo Villa Soomaaliya
Xisaabiyihii Mudug oo la baadi-goobayo
30.06.2018. View gallery
Mursal oo la kulmay Madaxweyne Geelle
28.06.2018. View gallery
Muuse Biixi oo Jawaab kulul ka bixiyay Hadal kasoo yeeray Gaas
26.06.2018. View gallery
Khayre oo Kulan la yeeshay dhigiisa Rwanda
25.06.2018. View gallery
Cirro: Caalamka wuxuu Somaliland u aqoonsan yahay maamul goboleed
Caarshe oo iska difaacay eedeynta Musuq-maasuqa
Khayre oo mucaaradka u hanjabey
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo Musuq-maasuq lagu eedeeyay
Farmaajo oo booqday Saldhigga Jeneraal Gordan
24.06.2018. View gallery
Xildhibaano ka hadlay Mudo korarsiga Gaas
Kalfadhiga 41aad ee Baarlamaanka Puntland oo furmay
23.06.2018. View gallery
Maxaa kasoo baxay Shirkii IGAD, Farmaajo yuu la kulmay?
22.06.2018. View gallery
Farmaajo oo Safar Deg Deg ah ugu ambabaxay Itoobiya
21.06.2018. View gallery
Jaaliyadda Norway oo Su'aallo ku garaacdey Khayre
Somaliland: Cirro oo dhaliil xooggan usoo jeediyay KULMIYE
Buurmadow oo la xabsiga laga sii daayay
20.06.2018. View gallery
Xaruntii laga maamulayay Hawada Soomaaliya oo la xiray
Waare oo soo dhaweeyay Heshiiska Farmaajo iyo Abiy Axmed
Dowladda Federaalka oo Jawaab ka bixisay hadalka Abiy Axmed
18.06.2018. View gallery
Dadka degan Garoonka Jeenyo oo la barakicinayo
Farmaajo iyo Abiy oo Shir Jaraa'id wada qabtey
16.06.2018. View gallery
Abiy Axmed oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho
Trump iyo Kim oo gaarey heshiis Taariikhi ah
12.06.2018. View gallery
Puntland oo Somaliland ku eedeysay inay taageerto Al-Shabaab
09.06.2018. View gallery
Shirka Baydhabo oo maalintii labaad galay
05.06.2018. View gallery
Dowladda oo $1 million ugu deeqday Somaliland
04.06.2018. View gallery
Khayre oo lagu soo dhaweeyay Baydhabo
03.06.2018. View gallery
Madaxweynaha HirShabeelle oo yimid Caasimadda
02.06.2018. View gallery
Shariif Xasan oo soo gaarey Muqdisho
Camey oo lagu wareejiyay Ciidamo iyo Gaadiid dagaal
Tahriibiyaal laga soo celiyay Libya oo Muqdisho kasoo dagay
30.05.2018. View gallery
Saddex katirsanaa Al-Shabaab oo dil lagu xukumay
Maxaa looga hadlay Kulankii Gollaha Wasiiradda?
Wasiir xilka wareejiyay
28.05.2018. View gallery
Mas'uuliyiin kormeeray Wasaaradda Batroolka
HirShabeelle oo lacag badan lagu wareejiyay
Khayre iyo Abiy Axmed oo kawada hadlay xiriirka labada dal
Xubno katirsan Al-Shabaab iyo Hub oo lasoo bandhigay
Somaliland dagaal kula jirto Puntland - Biixi
26.05.2018. View gallery
Wasiiro cusub oo lagu dhaariyay Muqdisho
Madaxda Galmudug oo is khilaafsan
Aqalka Sare oo baaq nabadeed u diray Puntland iyo Somaliland
Wadooyinka biyaha ay burburiyeen oo dib loo dhisayo
Aqalka Sare oo Lacag ugu deeqay Maamul goboleedyada dalka
Khayre oo gaarey Itoobiya xilli halkaasi uga horeeyo Fahad Yaasiin
Puntland oo ka hadashay dagaalka Tukaraq
25.05.2018. View gallery
Khayre iyo wasiiro booqday qoysas fatahaad saameysay
22.05.2018. View gallery
Roobab ay dad ku dhinteen oo ka da'ay Muqdisho
Dalxa oo dhaliilay hanaanka dib u eegista Dastuurka
20.05.2018. View gallery
Baarlamaanka oo kulan ku yeeshay Muqdisho
Muuse Biixi: Reer Puntland oo Dad Gob iyo Xariir ah oo jecel Nabada
19.05.2018. View gallery
Dowladda Soomaaliya oo qaadaysa Imtixaan mideysan
Xulka 17 jirada oo hadiyad la siiyay
Waare iyo Shariif Xasan oo kawada hadlay qorshe cusub
Wasiirka waxbarashada DFS oo shaaciyay waqtiga Imtixaanka midaysan
17.05.2018. View gallery
Maamulka gobolka Banaadir iyo Ha'adaha amniga oo iska kaashanaya amaanka
Muuse Biixi oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay dagaalka Tukaraq
15.05.2018. View gallery
Farmaajo oo la kulmay Amiirka Qadar
Shirka dib u eegista Dastuurka oo ka furmay Muqdisho
13.05.2018. View gallery
Ergayga QM oo gaarey magaalada Garoowe
12.05.2018. View gallery
Gudoomiyaha cusub ee Gollaha Shacabka oo la caleema-saaray
11.05.2018. View gallery
Ra'iisul Wasaare Khayre oo joogteeyay kormeerka Isgoysyada Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo deeq-biye noqotay
RW Khayre oo ka qeybgaly xuska maalinta Midowga Yurub
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay xarun Gurmad ah
Mucaaradka Jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka
10.05.2018. View gallery
Shiinaha oo laga dalbaday inuu dib u dhiso wadooyinka Muqdisho
08.05.2018. View gallery
Soomaaliya oo codsatay in laga qaado Xayiraadda Hubka [DAAWO]
Dowladda oo u diyaar-garowday weerarada Al-Shabaab
07.05.2018. View gallery
30 Sano kadib, Shirkadda Toyota oo xafiis ka furatey Muqdisho
Soomaaliya oo taageero u raadinaysa joojinta dhoofka Dhuxusha
Shirka Gollaha Wasiiradda oo lagu ansixiyay qodob muhiim ah
Dhalinyarada iyo Doorkooda dib u eegista Dastuurka
Nin kashifay musuqa ka jira Wasaaradda Kalluumeysiga Puntland
05.05.2018. View gallery
Xulka 17 jirada oo soo xaflad loo dhigay
03.05.2018. View gallery
DAAWO sida Xulka 17-jirada loogu soo dhaweeyay Muqdisho
02.05.2018. View gallery
Farmaajo oo booqasho ku tagey Beledweyne
30.04.2018. View gallery
Safiir hore oo loo doortay Gudoomiyaha Gollaha Shacabka
Xildhibaan Khaliif oo lagu aasay Muqdisho
RW Khayre oo Gudi u magacaabay Fatahaadda
28.04.2018. View gallery
Xasan Daahir oo difaacay Mukhtaar Roobow
26.04.2018. View gallery
Musharaxiin Khudbado ka jeediyay Baarlamaanka
25.04.2018. View gallery
Sarkaal katirsan Daacish oo lagu qabtey Muqdisho
24.04.2018. View gallery
Lacag ka timid South Africa oo lagu wareejiyay dowladda
Khayre oo daah-furayay tirakoobka shaqaalaha Rayidka
22.04.2018. View gallery
Gollaha Shacabka oo doortay Gudi doorasho
21.04.2018. View gallery
Dowladda DFS oo la wareegtay Xerada Jen Gordan
Farmaajo oo qaabiley Safiirka cusub ee Qadar
Muuse Biixi oo loogu baaqay inuu is-casilo
19.04.2018. View gallery
Bandhig faneedka Kiin Jaamac oo laga digay
18.04.2018. View gallery
Farmaajo oo kormeeray Xerada Jaalle Siyaad
Sheekh Shariif oo amaaney doorka Imaaraadka ee Soomaaliya
17.04.2018. View gallery
Xildhibaanno taageeray go'aanka Puntland [Daawo]
Gaas: Imaaraadka wuu sii wadi doonaa taageerada PMPF
16.04.2018. View gallery
Khayre oo Kulan amni la qaatey Taliye-yaal Ciidan
15.04.2018. View gallery
Farmaajo oo sagootin u sameeyay Jawaari
14.04.2018. View gallery
Madaxweyne Muuse Biixi oo Wareysi bixiyay
12.04.2018. View gallery
DFS oo shaacisay qorsho cusub oo lagu dhisayo Gollaha Degaanka
11.04.2018. View gallery
Jawaari iyo Farmaajo oo shir jaraa'id wada qabtey
Maxkamad ayiday dil lagu xukumay Korneel Ciidanka Badda
09.04.2018. View gallery
Cabdiqawi oo Khudbad ka jeediyay Shirka ISA
07.04.2018. View gallery
Aqalka Sare oo Su'aallo waydiiyay Safiirka Soomaaliya
AMISOM oo go'aan kasoo saartey Khilaafka Siyaasadeed ee DFS
Cabdi Bile Cabdi oo soo dhaweyn loogu sameeyay Muqdisho
Xildhibaan dhaliil u jeediyay Farmaajo
06.04.2018. View gallery
Tartan Orod Maaradoon ah oo lagu qabtay Muqdisho
Qaraxyo ka dhacay Muqdisho iyo Khasaaraha oo kordhay
Askar hub la gashay Gollaha Shacabka oo la xiray
05.04.2018. View gallery
Muudey oo dalbaday in tallaabo laga qaado Jawaari
04.04.2018. View gallery
Taliyeyaasha Ciidanka oo ka hadlay Fowdada Gollaha Shacabka
Jawaari oo beeniyay in Ciidamo ku qabsaday Gollaha Shacabka
Jawaari oo diiday inuu is-casilo, eedeyn culusna u jeediyay Farmaajo
03.04.2018. View gallery
Dakhliga Gudaha ee dowladda Soomaaliya oo kordhay
Maamulka Eng Yariisow oo diiday inuu Canshuurta ku qaado lacagta dalka
Dad ku dhintay dhisame ku dumay Muqdisho
Yariisow iyo Keating oo kawada hadlay dimuqraadiyeynta Muqdisho
01.04.2018. View gallery
Jawaari oo fahfaahiyay sababta loo baajiyay Kulankii Baarlamaanka
31.03.2018. View gallery
Farmaajo oo la eedeeyay xilli xiisad Siyaasadeed jirto
Fiqi: Xildhibaanada waxay go'aamin doonaan Mustaqbalka Soomaaliya
Mooshin laga keenayo Farmaajo iyo Khayre
Amarro cusub oo lagu soo rogay Xildhibaanada
Muudey oo go'aan kale kasoo saarey Mooshinka Jawaari
30.03.2018. View gallery
Jawaari: Anigaa shir gudoomin doono kulanka berri
Shaqaalihii Hawada Soomaaliya maamuli lahaa oo dalka la keenay
28.03.2018. View gallery
Caruurta Agoonta ah oo balan-qaad loo sameeyay
27.03.2018. View gallery
Aqalka Sare oo jeediyay talooyin ku aadan Mooshinka Jawaari
25.03.2018. View gallery
Rag katirsan Al Shabaab oo xukuuno lagu riday
Guddi loo magacaabay weerarkii Guriga Cabdi Qeybdiid
24.03.2018. View gallery
Gollaha Wasiiradda oo ansixiyay Heshiisyo lala galay Turkiga
22.03.2018. View gallery
Qarax ka dhacay Muqdisho oo Khasaaro ka dhashay
Khaliif Ciise Mudan oo ku shaaciyay Musharaxnimadiisa
Gudiga Senate-ka oo ka warbixiyay Khilaafka Siyaasadeed
Farmaajo oo tababar usoo xiray Ciidamo cusub
21.03.2018. View gallery
Muudey oo ku amray Xildhibaanada maqan inay soo xaadiraan
Bilicdii Caasimadda Soomaaliya oo dib loo soo celinayo
20.03.2018. View gallery
Xildhibaano ku shiray Muqdisho oo ka hadlay Mooshinka Jawaari
Wafdi ka socda dowladda Talyaaniga oo yimid Muqdisho
Doon dab ku qabsaday meel ku dhaw Dekedda Boosaaso
19.03.2018. View gallery
Jawaari: Cod baan ku joogaa, cod baana ku baxayaa
18.03.2018. View gallery
Musharax balan-qaadey inuu yareynayo mudada xilheynta Madaxweynaha Puntland
Aqalka Sare oo Gudi u magacaabay xalinta Xiisadda Gollaha Shacabka
Jawaari oo loogu baaqay inuu si Deg Deg ah isku casilo
Jawaari: Khayre ayaa la wareegay xaruntii Baarlamaanka
17.03.2018. View gallery
Ciidamo la wareegay Xarunta Baarlamaanka Soomaaliya
Mooshinka Jawaari oo fahfaahin laga bixiyay
Gollaha Wasiirada Soomaaliya oo ka dooday arrimo xasaasi ah
16.03.2018. View gallery
Muudey: Mooshinka Jawaari waa sharci, welina wuu taagan yahay
15.03.2018. View gallery
Xildhibaano ka hadlay Mooshinka Jawaari
14.03.2018. View gallery
Aqalka Sare oo ka dooday Go'aankii Gollaha Shacabka ee DP World
Madaxweyne Muuse Biixi oo lagu soo dhaweeyay Imaaraadka
Farmaajo oo Guluf ka dhan Al-Shabaab kawado Muqdisho
Ganacsatada Lacagta siisa Al-Shabaab oo loo hanjabay
13.03.2018. View gallery
Doodii Xildhibaanada ee Heshiiska Dekedda Berbera
Daawo Khudbaddii Musharax Faarax Cali Shire ee Minnesota
Doorashada 2020 oo wadatashi looga sameeyay Muqdisho
Gollaha Shacabka oo qaadacay Heshiiskii Berbera
12.03.2018. View gallery
Farmaajo oo u digay Shirkadaha maalgashiga
10.03.2018. View gallery
Juxa oo ka digay in doorashada Puntland 2019 laga dhigo mid dadban
Duqa Muqdisho oo kormeeray Fariisamaha Ciidanka
Maalinta 8-da Maarso oo laga xusay Muqdisho
09.03.2018. View gallery
Dowladda oo ka digtay dhisamaha dhulalka Danta Guud
Waxbarashada Gabdhaha oo looga shiray Muqdisho
Muuse Biixi oo jawaab u diray Xukuumadda Khayre
08.03.2018. View gallery
Dalxa: Soomaaliya waa leysku haystaa
Jarmalka oo Malaayiin doollar ugu deeqay Soomaaliya
Maxaabiis kale oo laga soo badbaadiyay Libya oo la keenay Muqdisho
Farmaajo oo booqday Saldhigyo lagu diyaariyay Ciidamo [Daawo]
06.03.2018. View gallery
Khasaaraha Qaraxii Zoobe oo kordhay
05.03.2018. View gallery
Maxaabiis mudo ku xirnaa India oo la keenay Muqdisho
04.03.2018. View gallery
Safarkii Farmajo ee Uganda oo laga warbixiyay
03.03.2018. View gallery
Maxaa kasoo baxay Shirkii Kampala ee Amniga Soomaaliya?
RW oo sharci darro ku tilmaamay Heshiiska Berbera
02.03.2018. View gallery
Howlo Nadaafadeed oo laga sameeyay Tiyaatarka Qaranka
Beyle oo markale ka hadlay arrimaha Canshuurta
28.02.2018. View gallery
AMISOM iyo Dowladda oo baaraya dhacdadii KM4
Xildhibaan Cusub oo lagu doortay magaalada Muqdisho
27.02.2018. View gallery
Eng Yariisow oo la kulmay Agaasiimiyaal
RW Kheyre oo Ka hadlay isku dhacyada Ciidamada Dowladda
26.02.2018. View gallery
Bashiir Goobe oo xilka la wareegay
Nin dhaawac ah oo ka sheekeeyay Qaraxadii Muqdisho
24.02.2018. View gallery
Maareeye oo ku hanjabay inuu ka baxayo dowladda
23.02.2018. View gallery
Maraakiib burburtay oo laga saarayo Dekedda Muqdisho
Khayre oo sameeyay Balanqaad Hal Milyan oo Dollar
22.02.2018. View gallery
Sarkaal katirsan Ciidanka Dowladda oo Dil lagu xukumay
20.02.2018. View gallery
Gollaha Wasiiradda oo magacaabay Taliyeyaal cusub
19.02.2018. View gallery
IGAD oo Somaliland kala hadashay Xaaladda Tukaraq
18.02.2018. View gallery
Ganacsiga Suuqa Bakaaraha oo xiran
Muhaajiriin laga soo celiyay Libya oo Muqdisho laga soo dejiyay.
17.02.2018. View gallery
Ciidanka Xoogga dalka oo burburiyay Idaacaddii Shabaab
14.02.2018. View gallery
Wasiirka Dastuurka oo afduub lagu eedeeyay
13.02.2018. View gallery
Dhaqaalo badan oo la siinayo Maamul Gobaleedyada
Beyle oo soo farageliyay Khilaafka Dekedda Muqdisho
12.02.2018. View gallery
Khayre oo ka hadlay Wadada ay Soomaaliya ku socoto
Shirkii Muqdisho oo War-murtiyeed laga soo saarey
11.02.2018. View gallery
Dabaal daga Ciidanka Badda Soomaaliya
10.02.2018. View gallery
Madaxweyne Farmaajo oo ka jaawabey su'aalo la waydiiyey
09.02.2018. View gallery
Siciid Maxamad Raage oo u jawaabey Cumar Ismaaciil Waaberi
08.02.2018. View gallery
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxyadii Boosaaso
Shirka Gollaha Amniga oo ka socda Villa Soomaaliya
06.02.2018. View gallery
Puntland oo eedaysay Shirkadda Duulimaadka Jubba
Raggii ka dambeeyay Qaraxii Zoobe oo la xukumay
Cosoble oo beeniyay eedeynta Sanbaloolshe [Wareysi]
05.02.2018. View gallery
Dowladda Soomaaliya oo balanqaad u samaysay Barakaciyaasha
Ciidamada oo laga dalbaday inay joojiyaan cunista Qaadka
04.02.2018. View gallery
Cabdi Qeybdiid: Waxaa la isku dayay in la i dilo
03.02.2018. View gallery
Soomaaliya Warbaahin Dowladeed Kama Jirto
Khasaaraha Dabkii Garoowe oo korartay
31.01.2018. View gallery
Muudey: Yaan la xaqirin Waxqabadka Xukuumadihii hore
30.01.2018. View gallery
Farmaajo oo ka qeybgalaya Shirka Madaxda Midowga Afrika
28.01.2018. View gallery
Kamaal Gutaale oo qabtey Shir Jaraa'd kadib xarigii loo geestay
27.01.2018. View gallery
Dil ka dhacay gudaha Xabsiga Dhexe ee Muqdisho
Daawo sida ay u dhacday Dhaarinta Gollaha Wasiiradda Somaliland
25.01.2018. View gallery
Guddiyada Dib u Eegista Dastuurka oo La Kulmay Bulshada
Farmaajo oo ka hadlay Safarkiisii Puntland iyo Galmudug
24.01.2018. View gallery
Muuse Biixi oo ka jawaabay Hadal kasoo yeeray Cirro
Shir caalami ah oo lagu qabtay Muqdisho
Farmaajo oo soo dhaweyn loogu sameeyay Caabudwaaq
22.01.2018. View gallery
Xilka Duqa Muqdisho halis ku jira iyo Odayaal difaacay
20.01.2018. View gallery
Farmaajo oo ciidamo u khudbeeyay
19.01.2018. View gallery
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Colaadda Gaalkacyo
16.01.2018. View gallery
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka dagay Galkacyo
14.01.2018. View gallery
Xukuumadda oo ka hadashay Darbiga Kenya ka dhisayso Xuduuda
11.01.2018. View gallery
Senator Farole oo Colaadda Sool ku eedeeyay labada maamul [Daawo]
10.01.2018. View gallery
Juxa: Soomaaliya way dayacan tahay
08.01.2018. View gallery
Farmaajo oo u riyaaqay sida loogu soo dhaweeyay Garoowe
07.01.2018. View gallery
Madaxweyne Muuse Biixi oo lagu soo dhaweeyay Jabuuti
Madaxweynaha Somaliland oo u safray Jabuuti [Daawo]
06.01.2018. View gallery
Wasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha oo yimid Muqdisho
05.01.2018. View gallery
Sidee u dhacday Xilka qaadista Wasiiradda?
04.01.2018. View gallery
CC Shakuur oo ka hor yimid go’aanka Maxkamadda Racfaanka
03.01.2018. View gallery
Kalfadhiga 2aad ee Aqalka Sare oo lasoo xiray
Ra'iisul Wasaare Khayre oo dalacsiiyay Askar Boolis ah
Daawo: Waqti kordhinta uu sameeyay Guddiga TPEC
Dowladda oo billowday Mashruuc Bacaadka looga saarayo Dekedda Muqdisho
01.01.2018. View gallery
MD Farmaajo oo loo ogolaaday saxiixa Miisaaniyadda 2018
31.12.2017. View gallery
42 Askari oo loo xiray Weerarkii Guriga Cabdi Qeybdiid
Cabdi Qeybdiid oo ka hadlay weerarka lagu qaadey Gurigiisa
30.12.2017. View gallery
Farmaajo oo fariin culus u diray Al Shabaab
28.12.2017. View gallery
Guddoomiyaha Haweenka Ee Aqalka Sare oo la doortay
27.12.2017. View gallery
Haddii aan annaga ahayn, Farmaajo mid mid ayuu adiin dhiibi lahaa
26.12.2017. View gallery
Xarun lagu xanaaneeyo Caruurta Askartii la dilay oo laga furay Muqdisho
Madaxweynaha cusub ee Somaliland oo la kulmay Cirro
24.12.2017. View gallery
Axmed Madoobe oo u hambalyeeyay Kooxda Jubbaland ee qaaday Koobka Ciyaaraha maamul goboleedyada
23.12.2017. View gallery
Cali Maxamed Geedi oo jawaab u diray CC Shakuur
22.12.2017. View gallery
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo ka hor-yimid sii deynta CC Shakuur
21.12.2017. View gallery
CC Shakuur: Waa laga gudbay xilligii qoriga wax lagu xukumayay
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xabsiga laga sii daayay
Ra'iisul Wasaare Khayre oo Khudbad ka jeediyay Xarunta Jeneraal Kaahiye
20.12.2017. View gallery
Xariga C/Ramaan C/Shakuur oo xiisad iyo kala qeybsanaan dhalisay
19.12.2017. View gallery
Farmaajo oo Guluf dagaal kawado Muqdisho
18.12.2017. View gallery
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Maxkamad lasoo taagayo
Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo ku baaqay in Xasaanada laga qaado Xildhibaano
17.12.2017. View gallery
Madaxa UNHCR oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Wariye Boqorka Bartamaha oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho
Gollaha Wasiiradda oo ka hadlay Qaraxii Jeneraal Kaahiye
15.12.2017. View gallery
Gollaha Wasiirada Somaliland oo lagu dhawaaqay
14.12.2017. View gallery
Khudbadii Madaxweynaha cusub ee Somaliland
13.12.2017. View gallery
Warbixinta QM ee dilalkii ka dhacay Soomaaliya 2016 2017
11.12.2017. View gallery
Madaxweynaha Maxamed Cabdudullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaarey Masar
08.12.2017. View gallery
Khudbad Madaxweynaha Soomaaliya ka akhriyey kulankii lagaga hadlayey amniga
06.12.2017. View gallery
Khayre: Xukuumada aan hogaamiyo waxay diyaar u tahay in lala xisaabtamo
05.12.2017. View gallery
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo booqasho ku tagey Abidjan
01.12.2017. View gallery
Maxkamada Sare Ee Somaliland oo ayiday Natiijada Doorashadii November 13
28.11.2017. View gallery
Ciyaartoy ka timid dalka Australia oo gaartey magaalada Boosaaso
27.11.2017. View gallery
Wakhti kooban ayay dawaladu bilowday in ay samayso horumaro kala duwan oo mir
25.11.2017. View gallery
Madaxweynaha cusub ee Somaliland iyo Guddoomiyaha Wadani oo kulmey
23.11.2017. View gallery
Faysal Waraabe oo sheegey in doorashada Somaliland Hab beleed u dhacdey
21.11.2017. View gallery
20.11.2017. View gallery
Safiirka China oo ammaanay Puntland iyo fariin uu diray shacabka dalkiisa
18.11.2017. View gallery
Cirro oo Fariin uDirey Taageerayaashiisa Lana Hadlay Guddiga Doorahsada ( Daawo)
16.11.2017. View gallery
Maxaan kala soconaa afgambiga Militari oo ka dhacey dalka Zimbabwe
15.11.2017. View gallery
Guddoomiyaha Xisbiga Wadani oo codkiisa ka dhiibtey magaalada Hargeysa
13.11.2017. View gallery
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmajo oo eedeeyey mucaaradka dowladiisa
11.11.2017. View gallery
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqdey Wasaarada Gashaandhiga Soomaaliya
07.11.2017. View gallery
Daawo: War-murtiyeedkii kasoo baxay shirka DFS iyo maamul goboleedyada Soomaaliya
06.11.2017. View gallery
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye oo ka hadlay magaalada Laascaano
03.11.2017. View gallery
Xisbiga WADDANI oo Burco ka sameeyay Isku soo bax Ololihiisa Doorashada
01.11.2017. View gallery
Ololaha Doorashada Musharax Muuse Biixi ee Berbera
31.10.2017. View gallery
Khudbad Madaxweyne Farmaajo ka jeediyey kulankii DF iyo maamulada Soomaaliya
Muqdisho: Furitaanka kulanka maamulada Soomaaliya iyp dowlada Federaalka
30.10.2017. View gallery
Khudbad Gudoomiyaha aqalka sare ka jeediyey Barlamanka Puntland
26.10.2017. View gallery
Daawo xulka Khudbadihii laga jeediyay Caleemo-saarkii Waare
25.10.2017. View gallery
Madaxweynaha Puntland iyo Gudoonada Barlamanka Federaalka oo saxaafada la hadley
24.10.2017. View gallery
Wiil Dhalinyaro ah oo Geeraar ka tiriyey xaalada Soomaaliya
20.10.2017. View gallery
RG oo fariin u direy in dadweynahu ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadkii qaraxa Muqdisho
18.10.2017. View gallery
Farmaajo oo ka qayb galey dhoofinta dhaawacyadii Turkiga loo direy
17.10.2017. View gallery
Rooboow iyo waxaa uu ka yiri qaraxii ka dhacey magaalada Muqdisho 14 Oct, 2017
MW Farmaajo oo taleefan uga jawaabaya qof baafinaya dadkii ku waxyeeloobey qaraxa
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay baroor diiq 3 maalmood ah
15.10.2017. View gallery
Munaasabad dekada magaalada Bosaaso loogu wareejiyey shirkada P&O
12.10.2017. View gallery
RW Khayre oo hanjabaad kaga jawaabay War-murtiyeedkii Kismaayo
Ra'isal wasaaraha Soomaaliya oo ka digey in dib logo noqdo burburkii
10.10.2017. View gallery
Madaxweynaha HirShabeele oo baaq u direy dowlada Federaalka Soomaaliya
Gaas oo ka hadlay Ajandayaasha shirka Kismaayo
08.10.2017. View gallery
Garoonka Diyaaradaha Garowe oo Daamur lagu bilaabay
03.10.2017. View gallery
02.10.2017. View gallery
Saldhiga ciidamada ee Turkiga- Muqdishu
30.09.2017. View gallery
Gaas oo bixiyay waraysi dhinacyo badan taabanaya
29.09.2017. View gallery
Puntland: Hormarinta Garowe oo laga shiray
27.09.2017. View gallery
Wasiir Bayle oo ka qayb galay shir ka furmay Garowe
26.09.2017. View gallery
Ardey ka qalin Jabisay Jaamacada Bariga Africa Garowe
24.09.2017. View gallery
Maamullada kale ee dalka Somalia oo Khibrad ka kororsanaya Puntland
09.09.2017. View gallery
Odoyaal iyo Siyaasiyiin dhaliilay Xukuumadda Puntland
07.09.2017. View gallery
Puntland oo go'aan kasoo saartay lacagta Somaliga
Madaxweynaha DDSI oo ka hadlay qabashada Qalbi Dhagax
05.09.2017. View gallery
Xafladda ciida oo looga hadlay Lacag Soomaaliga
Udxiyo loo qaybiyay masaakiin ku nool Garowe
Madaxweynaha Somalia oo hambalyo u diray shacabka
Ereg oo ka hadlay sababta shaqada looga joojiyay
28.08.2017. View gallery
Khilaafkii Gollaha Wakiillada Somaliland oo la xaliyey
Wasiirkii hore haweenka Puntland oo eedayn u jeedisay Xildhibaanada
14.08.2017. View gallery
Somaliland oo sheegtay inay heshiis la gashay Puntland
Maxkamadda oo mar kale dil ku xukuntay Ninkii ka dambeeyay dilkii Ex Wasiir Siraaji
31.07.2017. View gallery
Puntland oo lagu eedeeyay inay sii daysay maxaabiis katirsan Al Shabaab
Farole “Hadalkii Cabdirashiid waa Been Dastuurka waligiis waxba lagama badalin” [Daawo]
26.07.2017. View gallery
Farmaajo: Waxa simay qofka aqoonta leh iyo Jaahilka nidaamka 4.5
25.07.2017. View gallery
Gaas "Waxaan doonaynaa inaa dib u cusboonaysiino Axdigii Puntland ee 1998" [Daawo]
Daawo: Bandhiga Caalamiga ah ee Carwada buugaagta Garowe
20.07.2017. View gallery
Daawo: Madaxweyne Gaas oo si kulul uga hadlay Xariga Wariye Kilwe, Suuqyada Bosaso oo xiran iyo Shirkii Muqdishu
12.07.2017. View gallery
Daawo: Wafdi ka socda dowladda Federaalka oo Garowe Yimid
13.06.2017. View gallery
Daawo: Shir looga hadlayo Dimuqraadiyadda Puntland
Daawo: Ra'isal Wasaaraha Somalia oo khudbad ka jeediyay shirka Doha
14.05.2017. View gallery
Ninkii la xirnaan jiray Mandela oo Geeriyooday
28.03.2017. View gallery
Ethiopia: 48 qof oo ku dhintay Qashin-qub
13.03.2017. View gallery
Ra'isal wasaaraha Somalia oo aqbalay magacaabista Farmaajo
23.02.2017. View gallery
Farmaajo oo magacaabay Ra'isal wasaaraha Dalka
Farole oo shir Jara'id uga hadlay arrimo kala duwan
15.02.2017. View gallery
Farole: Garoonka Bosaso Marxuum Cadde ha loogu magac-daro
Murashax Farole oo tanaasulay islamarkaana eedeeyay madasha iyo madaxda maamul goboleedyada
07.02.2017. View gallery
Hay'ada GIZ oo ka hadashay eedeymaha musuq-maasuqa ee loo jeediyey Puntland
21.11.2016. View gallery
Murashax Farole oo khudbad ka hor jeediyay Barlamanka Puntland
19.10.2016. View gallery
Daawo: Puntland oo ku dhawaaqday xubnaheeda Aqalka Sare
08.10.2016. View gallery
Daawo: Sheekh Shariif oo ka hadlaya muranka badda Somalia
01.10.2016. View gallery
Daawo: Hees loo sameeyay ciidanka PSF
DAAWO: ​Cumar Cabdirashiid "Arrinta badda waa la marin-habaabiyay"
22.09.2016. View gallery
DAAWO: Xasan Sheekh oo ka hadlay muranka Badda
19.09.2016. View gallery
ISKALAJI OO SHIRIB KU SOO DHAWEEYAY MW XASAN SHEEKH
12.08.2016. View gallery
Madaxweyne Gaas oo soo xiray tartan Qur'aan
28.06.2016. View gallery
Daawo Khubadda Islaam Ciise ee shirka Isimada Garowe
26.05.2016. View gallery
Daawo: Hooyada dhashay gabadha isku gubtay Nauru oo waraysi bixisay
24.05.2016. View gallery
Daawo Xaalada Dhaawaca Askarta Puntland
20.05.2016. View gallery
Heshiiska DDS iyo Galmudug
04.05.2016. View gallery
Farriinta Dr. Farole ee ku aaddan xulista barlamanka cusub ee Somalia
11.04.2016. View gallery
Uganda's Museveni re-elected president amid protests
21.02.2016. View gallery
Daawo Muuqaalka Qaraxa Ankara Turkiga
17.02.2016. View gallery
Puntland: Michael Keating oo Garowe yimid
09.02.2016. View gallery
​Puntland: Madaxweynaha oo iclaamiyay abaaro jira
06.02.2016. View gallery
Muqdishu: Booqashadii kaaliha xoghayaha QM Jeffrey D. Feltman
Sweden: Arrests and scuffles after anti-refugee rampage
01.02.2016. View gallery
23.01.2016. View gallery
Analysis on gunmen attack on a northwest Pakistan university
21.01.2016. View gallery
Jiriifka: Boob La Sharciyeeyey! (Documentary) Qaybta Koowaad
18.01.2016. View gallery
Ganacsatada Bay iyo Bakool
15.01.2016. View gallery
Ansaxinta Xeerka Guddiga Doorashada Puntland
09.12.2014. View gallery
Daahfurka Xeeerka Caafimaadka
03.09.2014. View gallery
Dayactirka Wadooyina Puntland
02.09.2014. View gallery
Jaamacada ADMAS oo laga furey Garowe
01.09.2014. View gallery
Khudbada Madaxweynaha Ciida 30/08/2011
21.03.2014. View gallery
19.03.2014. View gallery
F. Waraabe: ''PL oo la jaanqaadey siyaasada caalamka''
03.03.2014. View gallery
Khudbad Cabdulaahi Yuusuf
27.11.2007. View gallery
Ansixintii R.W. Nuur Cade
25.11.2007. View gallery
PUNTLAND: Agaasimaha Idaacada Daljir oo Dil Ka Badbaadey Musharax Faarax Cali shire oo Weerar Afka ah ku qaday Gaas [DAAWO] Heshiis laga gaarey Colaaddii Gobolka Sool iyo Ganaaxyo la dul dhigey Beelaha
Gudoonka Gollaha Shacabka oo ku kala qeybsay Mooshinka Farmaajo Muudey oo isagu yeeray Villa Hargeysa Xildhibaano difaacaya Farmaajo Mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay Farmaajo iyo Mursal oo qabtey [Akhri Qodobada]
Mareykanka oo joogitaan diblomaasiyeed dib uga billaabay Soomaaliya Madaxweynihii hore ee Mareykanka oo geeriyoodey Trump oo bedelay Mowqifkiisa Sacuudiga ee Kiiska Khashoggi
Somaliland oo ka hadashay soo celinta joogitaanka diblomaasiyeed ee Mareykanka Somaliland oo go'aan ka qaadatey Wadahadalka dowladda Federaalka [Daawo] Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Mustafa Cagjar
Digniin lagasoo saaray Khatarta Al Saadicuuna Bil Xaq ​NORWEY: Somali badan oo ku cidday Magaalada Trosmo ​Shacabka Garowe oo maanta si wanaagsan u ciiday
FAALLO: Xaalad Abuurka Puntland & Doorashada Somaliland
Gudoonka Gollaha Shacabka oo ku kala qeybsay Mooshinka Farmaajo 09.12.2018. 22:35
Muudey oo isagu yeeray Villa Hargeysa Xildhibaano difaacaya Farmaajo 09.12.2018. 21:24
Mooshin xilka qaadis ah oo laga keenay Farmaajo iyo Mursal oo qabtey [Akhri Qodobada] 09.12.2018. 19:31
PUNTLAND: Agaasimaha Idaacada Daljir oo Dil Ka Badbaadey 09.12.2018. 18:12
Haysom oo tooshka ku ifiyay Musuq-maasuqa iyo sida loo ciribtiri karo 09.12.2018. 16:35
Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay duleedka Muqdisho 09.12.2018. 15:25